Ọtụtụ mmadụ nwere elu ọgwụgwụ apple ngwaọrụ na ha na-eji eme ihe kwa ụbọchị na-eme a dịgasị iche iche nke aga-eme na arụpụtaghị ihe. Anyị niile maara apple na-eme ka top àgwà mobile ngwaọrụ na anyị niile na-eji ha na anyị kwa ụbọchị ndụ na-agagharị na internet, igwu egwu mobile egwuregwu na ọtụtụ ihe na-eme ekwentị oku. Ke ibuotikọ emi anyị ga-atụle ụfọdụ n'ime ndị nkịtị iPhone mbipụta na onye ọrụ nwere ike Ahụmahụ na ekwentị oku.
Kpọọ na-akpaghị aka tụlee
A ọtụtụ ugboro ị pụrụ ịbụ njikere ime ma ọ bụ inweta ihe dị nnọọ mkpa-abata oku na ngwaọrụ gị na ka anya dị ka unu na-gaba ị na mberede na-enweta a ama esịn oku. Nke a pụrụ ịbụ nnọọ manụ dị ka gị iPhone hangs elu na gị na-enweghị ihe ọ bụla aka ná ntị. A workaround maka nke a nke bụ ka gị iPhone restarted na ọ ga-amalite na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị. Ọ bụrụ na a fix adịghị aka mgbe ahụ a factory nrụpụta ga--mere na ngwaọrụ.
Ekwentị eziga oku ma i nwere ike ghara ịnụ ndị ọzọ
Ò nwetụla mgbe ị anọwo na a oku na onye ị na-agwa okwu na mberede na-ekokwasị elu? Ọma na nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke a nkịtị ọkpụkpọ nsogbu. Ọ ga-ahụ na-abụ nnọọ doro anya na onye ahụ anaghị anụ gị mgbe na ekwentị oku ya mere ha kpebiri na-akwụsị ndị oku. Nke a na nke ga-egbo site mbịne ọkà okwu na gbanyụọ site na ịpị na ihuenyo ọkà okwu icon ruo mgbe ị na-amalite na-anụ onye ọzọ na oku na-aga. Nke a na obere atọ na-arụ ọrụ 90% nke ugboro na-akpali ọkà okwu ekwentị na gbanyụọ na-enyere ma ọ bụrụ na-arụ ọrụ otu ugboro ọzọ ebe ọ bụ na triggered apụ.
A otutu iPhone ọrụ mkpesa na ha adịghị enweta ekwentị oku ụbọchị na mgbe ụfọdụ ọbụna na izu. Nke a bụ nnọọ nkịtị na iPhones karịsịa iPhone 5s. Nke a na-mere site otu ihe iseokwu na ụfọdụ ngwa na ọrụ na-agba ọsọ na iPhone otú ị ga-ego nke égwu ị na nso nso arụnyere na-agbalị idozi nsogbu. Ọ bụrụ na ị na-enwe 'nga breaked' gị iPhone ọ bụ ukwuu ekwe omume n'ihi na nsogbu a ga-eme nakwa na 'nga n'inyawa' revokes gị akwụkwọ ikike.
Ekwentị atụgharịa anya mgbe ị na-agbalị ime ka a oku
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ka a oku na gị iPhone na ọ na mberede atụgharịa anya mgbe ahụ, e nwere ike ịbụ a nsogbu na gị iPhone mmetụta na ma ọ bụ wuru na batrị. Nsogbu a ga-ewetara onwe ya mgbe gị na iPhone mebiri emebi n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Idozi nke a nke ị ga-enwe iji tọgharịa iPhone iji iTunes na PC gị. Ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ ị ga-enwe ike ime ka oku na-enweghị iPhone ịgbanyụ maka mgbe. Ọ bụrụ na nsogbu ka dị ị ga-ewere gị iPhone na a gbaara dealer na-eji dochie akụkụ ma ọ bụ zipu ya azụ Apple bụrụ na ị nwere akwụkwọ ikike.
Kpọọ na-akpaghị aka-akwụsị mgbe ị na-agbalị-eziga ya
Inwe ihe iPhone na-akpaghị aka na-ekokwasị n'elu i nwere ike ịbụ mgbu n'olu mgbe na-agbalị na-akpọ ndị enyi gị na ezinụlọ ka ihe atụ, ma i nwere ike ime ka a oku n'agbanyeghị ugboro ole ị Ịkpọ oku. Nke a iPhone nsogbu bụ ugbu ọtụtụ ugboro mgbe iPhone ebe nchekwa juru na ekwentị ahụ enweghị ike hazie oku ị na-agbalị ime. The iPhone ga-mkpa ebe nchekwa nile di iche iche nke ọrụ. Ozugbo ị onwe elu na ebe nchekwa nke iPhone mgbe ahụ ị ga-aghọta na ị pụrụ ime ka oku gị hụrụ n'anya na ndị enyi otu ugboro ọzọ.
Oku na abata na-akpaghị aka na-aza
I nwere ike na-egwu egwuregwu na gị iPhone ma ọ bụ ọbụna eme nchọgharị na internet na 'mgbanaka mgbanaka' na-aga oku mbata ma gị na anya bu na iPhone na-akpaghị aka na-aza oku ekwentị ma na ị nwere na-amalite na-ekwu okwu ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka. Nke a na nke ugbu n'ihi na ekwentị menu button na-rapaara na presses site na ya onwe na i nwekwara họrọ nhọrọ maka ekwentị na ịza oku na menu bọtịnụ. Idozi nke a nke ị ga-enwe na-menu button ofu ma ọ bụ ịgbanwe nhọrọ na-ekwe ka menu bọtịnụ ịza oku.
IPhone Nwela rapaara na-abata oku
Mgbe ị na-enweta a oku na ngwaọrụ gị na ị na-aghọta na ị nwere ike ime ihe ọ bụla ma na-agwa onye ị na-akpọ mgbe ahụ na ị dị nnọọ achọpụtabeghị ihe nke na ngwaọrụ gị dị ka ọ na rapaara n'oge oku mbata. Gị ugbu a nwere na-agbalị na-ewepụ gị iPhone battey mkpọ ike ma ọ bụrụ na anya. Nke a na nke e mere site kedi ngwa ọdịnala na ngwaọrụ karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere 'nga breaked' gị iPhone eleghị anya ị ga-enweta nke a nke.
Mgbe data bụ na ekwentị adịghị anabata oku
Gị iPhone nwere ike ịjụ ekwentị niile oku mgbe ị na-eji a data atụmatụ ma ọ bụ mobile data na-agagharị na internet. Ekwentị anaghị eme nke a n'oge ndị ọzọ ma ozugbo na i tinye mobile data mode ị na-ahụ na ngwaọrụ gị adịghị anabata ihe ọ bụla oku otú a bụ doo anya na data mode bụ n'ihi nke nsogbu a. Iji idozi nke ị nwere ike ma gbanyụọ gị data na-eme ka na-enweta oku gị ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị ahụ na IPhone na mgbe ahụ ị ga-enwe ike inweta na-eme ka oku gị. Ọ bụrụ na nke ka dị mgbe ahụ ị ga ịrụ a factory nrụpụta site iTunes na PC gị.
Mgbe na oku ihuenyo udo ma ka na-presses
Ọzọ ọsọ nsogbu na bụ ugbu na ọtụtụ iPhones bụ na nke a udo na ihuenyo mgbe ị bụ ugbu a na oku. Ekwentị ka presses na oku na-aga nwere ike mgbe ụfọdụ akwụsị ma ọ bụrụ na ihu gị presses na-ezighị ezi na akara ngosi bọtịnụ. Iji idozi nke a ị ga-ego gị mmetụta dị ka nwere ike ọ gaghị na-arụ ọrụ nke ọma. Ozugbo mmetụta bụ ofu ị ga-enweghị nsogbu ọzọ.
Gosiri nụrụ mgbe oku na-
A nnọọ nkịtị iPhone nsogbu bụ echiche nụrụ n'oge a oku ekwentị. Ị nwere ike idozi nke a nke na ọtụtụ ụzọ. Ị nwere ike ma atụgharị ọkà okwu na IPhone na gbanyụọ ọzọ ka nke kpebiri ma ọ bụ ị pụrụ nanị Malitegharịa ekwentị na ekwentị na na kwesịrị idozi ya dị ka mma. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe ihe echoe nke n'oge ekwentị oku mgbe ahụ, e nwere ike ịbụ ndị ọzọ okwu na gị iPhone na ị ga-ahụ mkpa iji na-a reboot ma ọ bụ a factory nrụpụta nke ngwaọrụ.
iPhone 7 Images: Bụ ihe iPhone 7 ga-ele anya dị ka?
Olee otú Hichapụ Your iPhone Clean
30 Atụmatụ maka Bettery iPhone ndụ batrị
> Resource> iPhone> Kasị Ẹbụp iPhone akpọ Nsogbu, na otú e si edozi Ha?